Nhau - Kushanda kweiyo ultrasonic vibrating probe mune yakachena
Kushanda kweiyo ultrasonic vibrating probe mukuchenesa: Nekuda kweiyo yakasarudzika dhizaini yekutenderera chubhu mhando, ultrasonic vibrating probe inonyanya kukodzera kuchenesa ese marudzi emapombi. Nheyo yacho ndeyokushandura simba remagetsi kuita simba re ultrasonic uye nekuendesa iyo kuyera uye kudiridza zvinoenderana nemitemo yayo. Rusvingo rwemukati repombi rwunoita kuti riwane simba rakawanda. Iyo yekuvhundutsa ultrasonic inogadzirwa neiyo ultrasonic panguva yekufambisa maitiro inokonzera chiyero, mvura uye yemukati madziro epombi kuyerera. Nekuda kweakasiyana oscillation kuwanda kwesero, mvura uye nemadziro emukati epombi, mamorekuru emvura ari mupombi anowirirana, zvichiita simba rakakomba simba uye kukanganisa kupisa kupisa pamusoro. Iyo yepamusoro chikamu chinogadzirwa kuti ive crispy, kusvuurwa, kubviswa, kupwanywa, uye kuburitswa pamwe nekuburitswa kwemidziyo, nokudaro nekuziva kuchenesa kwemadziro emukati wepombi neiyo ultrasonic vibrating probe. Uye zvakare, iyo ultrasonic vibrating bar inogona zvakare kushandiswa pakuchenesa tangi muviri, uye inogona kuiswa zvakasununguka pane chero chinzvimbo cheteki yekuwachisa. Iko kushandiswa kunochinjika uye kuri nyore, uye iro rakabatikana vhoriyamu idiki, uye kuchenesa hakusiye kona yakafa.
Kushanda kweiyo ultrasonic vibrating probe mukudzora kwechinyakare Chinese mushonga
Iyo yeiyo ultrasonic chikamu inogona kushandiswa kutora izvo zvinoshanda zvinoshandiswa zvechinyakare Chinese mushonga. Chekutanga, solvent yekubvisa inowedzerwa mumudziyo, uye chiChinese chemushonga chinopwanywa kana kutemerwa kuita granules pazvinenge zvichidikanwa, ndokuiswa mune solvent yekubvisa; iyo inogadzira jenareta yakavhurwa, iyo ultrasonic vibration probe yakaiswa pamusoro petangi rekubvisa, uye iyo ultrasonic inoburitswa kune iyo yekuchera solvent, uye iyo ultrasonic ndiyo Iyo 'cavitation mhedzisiro' uye mechiniki chiito chinogadzirwa mune yeiyo yekubvisa solvent inogona kunyatso bvaruka rusero rusvingo rwechinhu chekurapa, kuitira kuti chinhu chinoshanda chiri munzvimbo yemahara uye chinyungudike muye solvent yekubvisa, uye kune rimwe divi, mafambiro e mamorekuru eiyo solvent yekubvisa anogona kukurumidzirwa, kuitira kuti iyo solvent ibviswe. Iri mukubatana nekukurumidza nezvinoshanda zvinoshandiswa mumushonga, uye zvakavhenganiswa uye kusanganiswa.
Tembiricha yakanakisa yeiyo ultrasonic vibrating probe yekubvisa mushonga ndeye 40-60 degrees Celsius, saka hapana chikonzero chekushongedza iyo bhaira kuti ipe kudziya kwemhepo, inoenderana nekuchengetedza simba uye kugadzirisa kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Zvinotonyanya kukosha, ine chekudzivirira pazvinhu zvinoshanda mune yekupisa-labile, nyore hydrolyzed kana oxidized mishonga. Iyo ultrasonic vibrating probe inowanzo mhanya mukati maminetsi makumi matatu kuti uwane mibairo yakanaka. Iko kugona kwekubvisa kwakagadziridzwa zvakanyanya kana zvichienzaniswa neyakajairwa maitiro, uye haina kuganhurirwa neyakaumbwa uye mamorekuru uremu hweChinese mishonga yemakwenzi. Iyo inokodzera mhando zhinji dzeChinese mishonga yemakwenzi uye zvakasiyana zvigadzirwa. Kubvisa (kusanganisira mvura-mvura kudhizaina uye yakasimba-emvura kubviswa). Naizvozvo, iko kushandiswa kweiyo ultrasonic vibrating probes yeChina mushonga kuburitsa kwave kuri kuwedzera kugamuchirwa nemakambani mazhinji emishonga.
Kushanda kweiyo ultrasonic vibrating probe mukukurumidza makemikari maitiro
Iko kumberi kwekupedzisira kweiyo ultrasonic vibrating probe runyoni rakanamatira padyo nemadziro ekunze egedhi kana mukati mehombekombe yemuviri weketuru. Iyo ultrasonic transducer inogona kutumira iyo ultrasonic kune yemakemikari maitiro mune iyo mhango, uye iyo mvura inorapwa ndeye kurapwa. Iyo cavitation mhedzisiro inogona kukonzeresa shanduko mukuita kweyakaitika system, kuparadza iyo solvent dhizaini yemakemikari anogadzikana mudumbu, inogadzira ipapo ipapo kupisa kwakanyanya uye kwakanyanya kumanikidza kwakaringana kutanga makemikari maitiro, kuumba yenzvimbo yakakwira simba simba nzvimbo, uye kukurudzira iyo kufambira mberi kwakatsetseka kwemakemikari maitiro. Chinhu chikuru cheicho chinogadzirisa maitiro eiyo vibrating probe.
Iyo yechipiri mhedzisiro yeiyo ultrasonic yakadai sekumagetsi kushamisika, emulsification, kupatsanura, kupwanya, nezvimwe zvese zvinobatsira kune kuzere kusanganisa kwema reactants. Iyo ultrasonic vibrating probes inoshandisa yakakwira-simba kuisa zvakanyanya ma transducers, ayo anogona kuita kuti zvinhu zviitwe zvakanyanya kumanikidzwa kufamba uye kumhanyisa. Iko kuchinjiswa kwenyaya kunogona kutsiva echinyakare zvemakaniki kushungurudzika Ehezve, mune anoshanda mafomu, zvirinani kushandisa yemagetsi musanganiswa kukurumidza kuita.
Kushanda kweiyo ultrasonic vibrating probe muanti-kuyera
Isu tinotora iyo inopisa exchanger semuenzaniso. Iyo ultrasonic vibrating probe inowanzo kuiswa mune inlet yeanopisa exchanger. Iyo inodzorwa ne flange yekubatanidza uye yekudzora vharuvhu. Inogona kushandiswa kugadzirisa uye kuchengetedza iyo ultrasonic michina isina kumira kugadzirwa. Chinhu chikuru ndechekuti iyo ultrasonic inopfuudza uye inogadzira simba panguva yekufambisa, uye mamorekuru echinhu senge chiyero, mvura nesimbi kupisa nzvimbo pamusoro inowana simba mune yekuzungunusa maitiro, uye mvura iri mune yekupisa yekuchinjana chubhu inogadzira vibration uye kwakanyanya kudhumhana apo uchiwana simba. Mamorekuru emvura ane akasiyana inorganic salts ayo asina kugadzikana mukati mawo anogadzira akawanda macavitation matema (cavitation), achiumba mvura mamorekuru cavitation mhango. Aya mabhuru, kana achikurumidza kukura uye nekukasika achivhara, anogadzira zvinokanganisa zvemuno zvezviuru zvemuchadenga nemajeti anomhanya-mhanya anosvika mazana mana emakiromita / h uye masimba akakwirira anodarika 5000 k. Aya masimba anoparadza kusangana kweakanaka uye asina kunaka maion neasidhi radicals uye anoparadza kuumbwa kwesero. Mamiriro ezvinhu kuti uwane anti-kuyera.
Kushanda kweiyo ultrasonic vibrating probe mukurapa kwemvura
Iyo ultrasonic vibrating probe inounganidza iyo ultrasonic probe kuisa simba pasimba, uye iyo yakasimba kurira kwakasimba kunogona kuwanikwa pane yekupedzisira kumeso kweiyo ultrasonic radiation. Nekuda kwesimba rekuunganidza simba rehwamanda, iro simba rezwi kuwanda kunovandudzwa zvakanyanya; iyo reaction inogona kunyatso kugadzirwa zvinoenderana nehukuru hweiyo acoustic simba. Chiso chinoburitsa kumeso kwekuferefeta chinowanzo gadzirirwa kuti chioneke, kuitira kuti probe yehukuru hwakakodzera hwechiso chekupedzisira inogona kusarudzwa chero nguva zvinoenderana nenzwi rinodiwa. Panguva imwecheteyo, kana probe ikashatiswa zvakanyanya necavitation, chikamu chekupedzisira chete chinoda kuchinjwa chisina kutsiva mutengo. Inodhura yakazara vibration probe. Ultrasonic vibrating probes inogona kushandiswa kurapa akasiyana akasiyana echiratidziro e organic wastewaters. Iwo ave achishandiswa mune monocyclic anonhuwirira makomponi, polycyclic anonhuwirira mahydrocarbon, phenols, ane chlorine mahydrocarboni, ane chlorine mahydrocarbon, organic acids, madhayi, alcoholols, ketoni, nezvimwe Tsvagurudzo yemvura yemvura yakasviba uye yakawana mhedzisiro. Mumvura chaiyo yemuindasitiri, michina yakashandiswa kurapa mvura inogadzira mapepa, kudhinda uye kudhaya mvura yakasviba, mvura yakasviba, yekumwa mvura yakasviba, yemvura yakasviba, yekurasa marara, nezvimwewo, uye yakawana mhedzisiro.